> Resource > Video > Sida loo Beddelaan M4V in FLV
Marka aad hesho qaar ka mid ah files cajiib M4V bixi ama ka iibsaday Lugood oo aad rabto inaad iyaga wadaagaan internet-ka, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u badalo in ay qaab FLV. FLV waa nooc multimedia loogu talagalay by Adobe Flash Player oo loo isticmaalo in lagu marti naqshadeynta sare, animation, audio, iyo H.264 video oo dhan ka mid ah. Waxa ay si weyn u isticmaala websites ka mid yihiin YouTube, Google Video, Yahoo! Video, Reuters.com, metacafe, iyo qaar badan oo kale oo bixiya news.
Si loogu badalo M4V si fudud oo dhaqso Flv, sidoo kale faylasha la gediyay aadka u la jaan qaada website bixiyeyaasha kala duwan, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa waxa aad u baahan tahay. Waxaa qoreysa tayo sare leh, hufnaan, iyo xog. Iyadoo presets siiyaa online videos sida Facebook video, YouTube video, Google video, iwm aad u bedeli karaan faylasha M4V in flv files leh dhibaatana ma leh. Dhanka kale, iyada oo la isticmaalayo hawlaha tafatirka sim, aad taaban karo ilaa aad video by abuurka, falinjeeerka, dalban video saamayn, isagoo intaa ku daray watermark, subtitles, iwm in hab fudud. Akhri si aad u hesho faahfaahin.
Download Free version jirrabaadda kuwa aan M4V in FLV Video Converter:
Fiiro gaar ah: Haddii aad asalka videos yihiin kuwo la ilaaliyo M4Vs (ie ka Lugood iibsaday), taas smart video Converter kaa caawin kara inaad ka saartid in video nooca caadiga ah, laakiin tani waxaa laga codsadaa oo kaliya in Windows version, ma version Mac.
1 Load M4V files si M4V in ay FLV video Converter
Si aad u dajiyaan aad files M4V, aad leedahay hoos ku qoran laba doorasho:
Guji ka button inay ku shuban aad files W4A deegaanka si ay barnaamijkan.
Si fudud u jiidi aad M4V videos si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
Marka dhammaan faylasha ku raran yihiin, waxay ku tusin doonaa sida thumnailes in shayga saxaarad bidix, waxaad hagaajin kartaa amarka, la badalo magaca wax soo saarka, ama iyaga ku eegaan in screen saxda ah. Fiiro Gaar ah: diinta Dufcaddii waxaa taageera si aad u dajiyaan karaa in ka badan hal warbaahinta files barnaamijka diinta.
2 Dooro FLV sida qaab wax soo saarka
Riix liiska qaab hoos-hoos ee "Qaabka Output" Murayaad ka dibna dooran "FLV" ka "Qaabka"> "Web". Haddii aad rabto in aad geliyaan video ah diinta YouTube ama Facebook ama Yahoo, kaliya dooran presets halkan, way weyn sida caadiga ah u shaqeeyaan.
Wixii tixgelin dheeraad ah ee aad u baahan tahay, taas smart video Converter sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay ula qabsadaan koobin ee video iyo maqal ah labadaba. Waxaad riix kartaa "Settings" doorasho si ay u helaan suuqa kala goobta.
3 Habee wax soo saarka aad videos
Ka hor inta diinta M4V in FLV, waxaad noola, jar, shaandheyn videos, dalban saamaynta gaar ah iwm si aad videos gaar ah iyo iminka.
4 bilow si loogu badalo M4V in FLV
Marka goobaha oo dhan sida aad qorshaynayso, oo kaliya ku dhacay "Beddelaan" button oo ha video Converter taas loo sameeyo inteeda kale. Waa mid aad u hufan iyo bar horumarka waqtiga inta hadhay ku tusi doonaa. Ka dib markii ay diinta ka dhamaystay, waxaad si fudud u gali kartaa FLV ee la gediyay in website aad jeceshahay qaybsado xadka lahayn.
Download Free hoos ku M4V in Converter FLV: